Spotify waxay hagaajineysaa waxqabadka | TeraNews.net
Barnaamijka Spotify wuxuu hagaajiyaa shaqeynta
qoraaga Kravetz Pavel La daabacay 07.12.2020
Shaashad xiiso leh oo ah nooca Beta ee barnaamijka Spotify ayaa soo gashay internetka. Waxaa jira suurtagalnimada in barnaamijka Spotify uu hagaajinayo shaqeynta. Adeeg loogu talagalay raadinta muusikada maktabadaha shakhsi ahaaneed ayaa ka muuqan doona goobaha haddii aysan jirin xiriir la leh keydka macluumaadka.
Waa maxay Spotify iyo Maxaad ugu Baahan Tahay
Spotify waa adeeg kuu ogolaanaya inaad si sharci ah uga dhagaysto heesaha internetka internetka. Muuqaalka ugu muhiimsan ee barnaamijku wuxuu ku jiraa algorithms-kiisa shaqada. Waa ku filan tahay in la dhagaysto dhowr heesood oo loogu talagalay adeegga si toos ah loola qabsado dhadhanka muusikada ee dhagaystaha. Dhamaadka playlist playback, barnaamijka laftiisa ayaa helaya muusig cusub wuxuuna ku deeqayaa inuu dhageysto. Marka loo eego dib u eegista isticmaalaha, 99% arjiga “wuu qiyaasaa” xiisaha milkiilaha.
Waxa kale oo aad hilmaami kartaa soo dejinta ururinta muusikada ee durdurrada weligood. Adeeggu laftiisu wuxuu soo ururiyaa Isku-darka jidadka ugu caansan maalin kasta, usbuuc, bishii, sanadkii. Waad u kala sooci kartaa muusikada si waafaqsan shuruudo kala duwan
Waa inaad lacag bixisaa si aad u isticmaasho Spotify. Ama halkii, iska qor ilaa mudo cayiman oo isticmaalka ah. Qiimaha adeeggu waa ka duwan yahay waddan kasta. Kumaa qoraya sicirka qiimaha lama yaqaan. Maxaa yeelay qaar ka mid ah dalalka hodanka ah qiimaha shirkadda 'Spotify' waa mid jaban. Wadamada saboolka ah (isla lacagta dollarka ah) waa inaad bixisaa 5-10 jeer kabadan.
Dabcan, maahan inaad wax bixiso adoo isticmaalaya Spotify bilaash. Laakiin waa inaad dulqaadataa xayeeysiinta, mamnuuc ka degida muusikada kaydintaada. Iyo sidoo kale, dhowr cilladood oo ku saabsan tayada iyo wareejinta wadada aan xadidneyn.
Xaqiiqdii, barnaamijyayaashu waxay ahayd inay soo bandhigaan waxqabad hagaagsan muddo dheer. Ka dib oo dhan, barnaamijka waa la bixiyaa oo adeeggu waa inuu noqdaa heerka ku habboon. Nooca beta ayaa ku daray awooda lagu dhageysto muusikada qadka. Si tan loo sameeyo, scanner ayaa ka soo muuqan doona barnaamijka, kaas oo ka raadin doona raadadka kaydinta taleefannada gacanta ee dhammaan buuggaagta. Qiyaas ahaan, shaqadani waxay u egtahay adeegga Youtube "isku-darka qadka".
In kasta oo codsigu weydiisto lacag, haddana wuxuu si weyn u fududeynayaa nolosha dadka isticmaala. Caadi ahaan kuwa doorbidaya alaabada cusub, halkii ay ka "xoqin lahaayeen" raadadkii hore godadka.
Hab cusub oo lacag looga sameeyo dacwadaha ka dhanka ah Apple
Honor Pad 7 waa kiniinkii ugu horreeyay ee summad madax-bannaan oo Shiineys ah